Ngomgqibelo weli-18 kweyoMsintsi, iphulo lehlabathi liza kuphinda libuye: uSuku lokuCoca oluhlelwe nguCoca iHlabathi. Njengoko uMama weNdalo enesakhono esilinganiselweyo sokucoca ngokwakho, le nkqubo ijolise ...
Njengenxalenye yomsitho weveki yamanzi wamanzi we-2021, iBhaso laManzi loLutsha laseStockholm liququzelela ukhuphiswano lwamazwe aphesheya apho abafundi abaphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwengama-20 ubudala bacebisa izisombululo kumngeni omkhulu wamanzi ...
Umoya wase China Uqaqambisa eThailand
Phantse iminyaka emithathu ukusukela kwixesha lokuqala esanyathela ngalo eThailand ngo-Okthobha u-2018. Emva phayaa ibingumhlaba oyinkqantosi, kodwa ngoku ujike waba yindawo yeziko ebandakanya imveliso ezi-5 ...
AbaCoci bamanzi baWonga iBhaso eliyiNtloko le-IF Design 2021
Kumvuzo we-iF woyilo osandula ukugqitywa, iFilter Tech ibinelungelo lokuchongwa njengabaphumeleleyo kubathathi-nxaxheba abangama-3,693 abavela kumazwe angama-52. Iimveliso eziwinileyo ibingu: Bubble, Drip kunye neDetox yokutya ...
Hlala unolwazi ngesihluzi samanzi sethu kwi-129th Canton Fair
Ngaba ujonge ukuphucula amanzi kumakhaya akho? Ukukhusela izixhobo zakho zasekhaya? Yandisa intuthuzelo yakho iyonke yokusebenzisa amanzi? Kwiveki ezayo, siza kubonisa inani lemifudlana ephilayo ...
Ukuqala kwam ukufika eThailand, ndandingazi nokuba ngowuphi ummi waseThais, kodwa kamva, ndaziswa ngabahlobo bam, kubahlobo baseTaiwan ababesandula ...
Isiseko saseThailand, sikwinkqubela phambili
Iphondo laseRayong, elaziwa njenge “Detroit yaseMpuma”, njengeyona dolophu iphambili yezorhwebo eThailand, ikwindawo yokuqala eThailand ngokwexabiso elipheleleyo lemveliso yephondo. Enkosi ku...
Umsitho oqhekezayo wembaleki yeThailand
Nge-Okthobha ye-17, i-2019, umsitho wokuqhekeka komhlaba weprojekthi yokuqala yokwakha iRunner Industry (Thailand) Co., Ltd ibibanjelwe eThailand Amata City (eRayong ...
Hluza iCartridge, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Indlu yonke yokuCoca uManzi,